Upperlọ elu nke Social Media na-agbaghara Anyị | Martech Zone
Friday, February 22, 2013 Friday, February 22, 2013 Douglas Karr
N’ụlọ akwụkwọ sekọndrị nwa m nwanyị, ha nwere mpaghara dị nsọ nye ndị agadi akpọrọ “akwa rug”. “Ihe ndị mebiri emebi” bụ akụkụ dị ntụsara ahụ e wuru n’otu ógbè ndị isi nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị ya bụ́ ebe ndị nọ n’ụlọ akwụkwọ sekọndrị pụrụ ịnọkọ. Enweghi ikike ọhụụ ma ọ bụ nke obere agadi ute.
Meanda pụtara, ọ bụghị ya? Na tiori, o n’enye ndi okenye mmuta nke mpako. Ma ikekwe ọ na-enye ụmụ klasị dị ala ịnụ ọkụ n'obi ịrịgo otu ụbọchị kapet ahụ bụ nke ha. Dị ka ọ bụla klas sistemu, agbanyeghị, ihe ọghọm bụ nkewa na - eto eto n’etiti klasị elu na ndị ọzọ.
Laa azụ n'oge mmalite nke mgbasa ozi mmekọrịta, enweghị usoro klas. Mgbe mmadụ dere nnukwu akwụkwọ blọọgụ na blọọgụ ahụ, anyị niile nwere obi ụtọ wee dee ya ma bulie ọkwa ha. N'ezie, ruo ogologo oge, m na-akwalite naanị blọgụ nke blọọgụ ọhụrụ nke m chọpụtara iji gbaa ha ume ma hụ na ha nwetara mpempe akwụkwọ ahụ. Ọtụtụ ndị enyi m na ntanetị taa bụ ndị na-achọpụta ma na-akọrọ blọọgụ m ma ọ bụ nke ọzọ.
elekọta mmadụ media nwere gbanwere. Usoro klaasị zuru oke. Ndị klas nke elu na nkasi obi na-ekewapụ ụwa na "akwa rugharị" ha. Adịghị m nke klaasị nke elu, mana ọ ga-amasị m iche na m nọ nso. Mana oge ụfọdụ ọ naghị adị ya mma. Ana m agakwuru ọtụtụ n'ime ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ha azaghị. Ha anaghị aza na Twitter, Facebook, Google+ ma ọ bụ ọbụlagodi site na email.
ngosi: Nke a nwere ike ịkọwa omume m nke ọma. Anaghị m akatọ ndị ọzọ dịka naanị ị na-ahụ mgbanwe dị na mbara igwe mmekọrịta.
Ọ dị ịtụnanya. Ọ bụ ezie na ndị a na-ede akwụkwọ banyere ike nke mgbasa ozi mmekọrịta ma na-akọ akụkọ ha banyere ohere ndị ọzọ nyere ha, ha na-eleghara ịgbatị aka na onye na-esote. Agụrụ m ọtụtụ n'ime blọọgụ ha wee hụ ọtụtụ okwu sitere n'aka ndị na-eso ụzọ raara onwe ha nye na-edegharị, na -ekere ma na-ekele ha maka nnukwu ọdịnaya… na-enweghị nzaghachi site na pundit. Onweghị. Ọ bụghị pipụ.
Site na uto nke ụlọ ọrụ a, anaghị m ekwupụta na a ga-aza arịrịọ ọ bụla - ọnụọgụ ha buru oke ibu. Mụ onwe m achọpụtala na ọ gaghị ekwe omume ịza ajụjụ niile. Ma m do gbalịa. Ọ bụrụ na mkparịta ụka na-ada na netwọkụ mmekọrịta m ma mara banyere ya, ana m enwe mkpali isonyere mkparịta ụka ahụ. Ọ bụ obere ihe m nwere ike ime nyere na netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta m agaghị enwe ikike ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka ndị na-agụ ya na ndị na-eso ụzọ m.
Agaghị m akpọ aha, agaghị m ekwukwa na ọ bụ onye ọ bụla. Enwere ọtụtụ iche. Agbanyeghị, enwerekwa ọtụtụ kpakpando mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na-anaghị eri nri nkịta ha. Ha na-aga dee akwụkwọ, na-ekwu okwu ma na-eso ndị isi ụlọ ọrụ na-ekwurịta okwu - na-abara ha mba mgbe ha na-anaghị ahụ ụzọ aku. Mgbe ahụ ha na-akpọ ndị enyi ha ndị ọzọ dị elu ma soro ha kparịta ụka n'elu mmanya mmanya dị mma na ndagwurugwu steak - na-eleghara netwọkụ ha anya.
Ekwenyela na ndi otu aka. Ọ bụrụ n ’esoro otu n’ime ndị ọkachamara a, ịzụ akwụkwọ ha na ịga ile ha ka ha na-ekwu okwu… were nkeji ole na ole tụlee ọrụ ha. Hà na-agbaso nduzi ha? Ha na-aza ndị ọhụrụ na ndị obere na Facebook peeji ha? Ha na-ekwuputa ọmarịcha nkọwa sitere n'aka ụmụazụ na-enweghị ndị na-eso ụzọ ha? Hà na-agbaso mkparịta ụka ha na azịza nke blọgụ nke ha?
Ọ bụrụ na ha emeghị, gaa chọta onye na-eme ya! Wepụ ute ahụ n'okpuru ha.
Tags: rantelekọta mmadụ mediandị na-ede akwụkwọ mgbasa ozindị ọkachamara n'ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe yaelekọta mmadụ media gurusndị na-ekwu okwu mgbasa ozi na-elekọta mmadụ
Feb 22, 2013 na 3:57 PM
Ọ bụrụ na m nwere ike ịsị na m kwenyere na ozi gị, echekwara m na ihe ị na-ekwu ga-abụ eziokwu nye ọtụtụ ndị ọrụ mgbasa ozi na ndị na-ede blọgụ mana m na-ewere onwe m dị obere na ụwa ịde blọgụ na enweghị m ihe ọ bụla mana ezigbo ahụmịhe na-eru ka ụfọdụ ndị agadi.
Enwetara m nzaghachi site na ụfọdụ nnukwu ụmụ okorobịa dị ka Chris Brogan, Jason Falls, Scott Stratten, Dave Kerpen wdg.M edekwara m banyere Dave Kerpen na akwụkwọ ya ugboro ole na ole na ọ kesara ihe m dere na netwọkụ mmekọrịta ya.
Site n'ahụmahụ m achọpụtala na ọtụtụ nnukwu ụmụ okorobịa na mgbasa ozi mgbasa ozi na-eme ihe ha na-ekwusa, nke nwere ike ịbụ ihe kpatara ha ji eme nke ọma.
Feb 22, 2013 na 4:09 PM
Nke ahụ dị mma ịnụ, @mattso southern: disqus! O nwere ike ịbụ na m bụ onye nzuzu. 🙂
Feb 22, 2013 na 4:10 PM
Ọfọn ị zaghachi na nkwupụta nke blọgụ gị ka ị ghara ịbụ nke jerk! 🙂
Feb 22, 2013 na 4:49 PM
Douglas, Yikes! M olileanya na m na "ọjọọ agadi" Atiya. Achọrọ m iche na m na-esetịpụ aka, na-aza, ma na-ekere òkè. Onwere ndi m gha atule n’uzo? N'ezie. Enwere oge mgbe anaghị m etinye aka (ma ọ bụ enweghị ike) itinye aka. Dịka ọmụmaatụ, n'izu gara aga, anọ m n'ime ime obodo dị na Peru na Bolivia ma nwee oke ohere ịnweta webụ (naanị ihe dị ka elekere kwa ụbọchị). Nyaahụ m nọ n'ụgbọ elu ruo awa 10. Mgbe ụfọdụ, mgbe m kwusịrị okwu, aga m enweta tweets 200 ma ọ bụ 300 na arịrịọ enyi Facebook 50. Anaghị m eme ngọpụ, naanị na-ekwu ihe bụ eziokwu. Ma, m na-achọkarị ka ọ dịrị m mfe ịbịakwute m.
Feb 22, 2013 na 5:02 PM
@douglaskarr: disqus @ google-4e3cce4e05af3f9a841d921fe02f1ea7: disqus @mattso southern: disqus Nnyocha oma. M n'ezie na-ahụ ụfọdụ ndị agadi-akpụ "nanị klọb" na iru na newbie na ebumnobi abụghị ezi njikọ, kama na-enwe olileanya iji eriri ha na a "free" webinar na mgbe ahụ na-a ahịa pitch. Ihe a bụ, dị ka ndị nọ na akwa rịa elu, n'oge na-adịghị anya ha ga-aga n'ihu ma gbanwee, ma ọ bụ ha onwe ha ga-abụ onye emeriri emerụ na-emegharị akwụkwọ nke iri na abụọ.
Feb 23, 2013 n’elekere 8:52 nke abali
Hụ echiche ahụ na "ịmegharị ọkwa nke iri na abụọ"! Enwekwara ihe atụ nke ndị ahụ si ụlọ akwụkwọ sekọndrị ka bi n'ụlọ, ịmịpụta gas, na ịtụgharị uche ụbọchị ha ịbụ kpakpando bọọlụ kachasị mma ọ ga-abụ maka ha.
Feb 22, 2013 na 5:11 PM
Nke a ọ bụ ihe ịtụnanya. Ndị na-ahụ maka njikwa na-ekwusa ike mgbanwe, mana ha bụ ndị kachasị agbanwe agbanwe. Eziokwu: ha ka na-emejuputa SAP otu ha si dị afọ 20 gara aga. Yabụ, "social media gurus" bụ naanị ndị na-ahụ maka ndụmọdụ. Chetakwa, onye ndụmọdụ bụ nwa okorobịa maara ụzọ 1,000 iji mee ịhụnanya, mana enweghị enyi nwanyị. (ngosi: Abụ m Onye Mmekọ na otu n'ime Big4)
Feb 23, 2013 n’elekere 8:47 nke abali
N'okwu m ọ dịkarịa ala, abụghị m onye ndụmọdụ. M na-ede akwụkwọ, na-ekwu okwu, na-agba mbọ, na-azụ ụfọdụ ọrụ, ma na-anọdụ ala na bọọdụ ndụmọdụ. Agbanyeghị, kemgbe afọ 6, ọ dịbeghị ọrụ m mere.
Feb 22, 2013 na 6:45 PM
Enweela m echiche yiri nke ahụ, edere ya tupu .. ka 'ọnọdụ nwere ike ịdị iche'. Dị ka Matt Ahụwo m ma nwee ahụmahụ na 'ndị ọkachamara' na-eje ije okwu ha na dịka ị hụrụ ha .. ọ bụghị nke ukwuu. Elere m ole na ole n'ime ha ka ha kwuo, mana lee ka ndị ọzọ hapụrụ. Ichebara ndị na-eme ka okirikiri ahụ na-aga .. anyị nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na ndị ndụmọdụ anyị anaghị eme ihe ha na-ekwusa, ọ bụrụ na anyị azụrụ akwụkwọ ndị ahụ, gaa okwu ihu ọha, kwụọ ụgwọ ụgwọ ịgba ajụjụ, pịa bọtịnụ na akara baajị ma nọgide na-egwu egwuregwu ahụ. . Amaghi m ma oburu na ha apughi ime anyi .. onye na-azu ahia lezie anya?
Ugbu a, uche m bụ m. Ana m agbalị ịghara ichegbubiga onwe gị ókè banyere ndị ọzọ, ihe m na-enweghị ike ịchịkwa. Aga m eme ihe m, rụsie ọrụ ike na ịmekwu ihe, na-eme m nke ọma, ndị ahịa m, my biz. FWIW.
Feb 23, 2013 n’elekere 4:26 nke abali
@douglas, ikekwe ihe ị na-ekwu bụ eziokwu, eleghị anya ọ mere gị, ikekwe "ndị okenye" ​​na-eru ọkwa iji zaghachi naanị mkparịta ụka a na-eme wih ụmụ nwoke ka ha na-agbakwunye uru… mana ntọala nke ihe ị na-ekwu na-ada ụda na-ezighi ezi. Nweta ọkwa dị elu na mgbasa ozi mmekọrịta anaghị enye gị iwu ịzaghachi ọ bụla post ma ọ bụ ikwu okwu, ma ọ bụ tinye na ederede nwere ike ghara ịgbakwunye uru. Na njedebe, ọ bụ ya mere ha ji nọrọ (na-agbakwunye ngwa nri na mkparịta ụka ahụ). Maka ụfọdụ ndị dịka David Meerman, ọ gaghị ekwe omume ịme ya (belụsọ ma ọ goro onye inyeaka).
Feb 23, 2013 n’elekere 8:50 nke abali
Achọpụtawo m echiche nke inwe onye inyeaka. Ma ekwubiri m na ọ nweghị ụzọ m ga-esi mee ka onye ọzọ sonye aha m na mmekọrịta mmadụ na ibe m. Ụzọ adịghị. Ọ bụrụ na ọ nwere aha m na ya, edere m ya. Agwawo m ndị dị ka Guy Kawasaki na m hụrụ ihe ha na-eme n'anya kama ha ekwenyeghị na mgbasa ozi na ntinye akwụkwọ site n'aka ndị enyemaka.
Feb 24, 2013 na 2:39 PM
Nke mbu, ana m ekwuputa ma mesie ike mmụba na Social Media na onye na-eso ya "Onye na-eso ụzọ". Nke abuo, ụfọdụ ndị ahọrọghị iji nlezianya kpuchie bandwidth, posts, na igbe site na enweghị isi ịnakwere nkwupụta na "Retweets". N'ikpeazụ, nke a bụ ndụ. DO anataghị ihe nrite naanị maka igosi. Ezi njikọta na-arịọ nzaghachi; “Ditto -ads” adịghị.
Feb 28, 2013 n’elekere 12:27 nke abali
Douglas Marjorie Clayman dere banyere nke a n'ụzọ dị iche - otu ụdị ahụ. Anọ m na-anata njedebe nke afọ anọ gara aga ma na-eju m anya n'oge ahụ na ugbu a. Omume ha mere na ha kwekọghị n'ihe ha kwuru, amụtara m ngwa ngwa onye jupụtara ^ * (.
Ọ na-ewute m mgbe ị hụrụ omume dị otu a, m wee kwuo whateva, lekwasịrị anya n'ihe m na-etolite maka azụmaahịa m. N'akụkụ ọzọ nke ọgbaghara a, amaara m usoro ọ bụla nke ụzọ, site na ịnye ndị na-ege ntị uru kwa izu - onye ọ bụla na-ege ntị anyị nwere maka #BBSradio sitere n'ije ije n'okwu m ọ bụghị n'ihi na A-lister kpalitere m ruo "ndị na-ege ha ntị. ”
Enwere m ike ịgbagha ole na ole site na ịkekọrịta otu esi agwa m okwu n'azụ. Amụtara m ọsọ ọsọ, ha na-echegbu onwe ha banyere ọkwa ha mgbe mmadụ bịara dị ka onye maara ihe ka ha bụ na ọ bụ ihe ihere darn. Achọrọ m ịkwalite ndị gbara m gburugburu ma mara na anyị niile nwere ike itolite. Ọ naghị anara ibe ya ma ọ bụrụ na otu onye n’ime anyị enwee ihe ịga nke ọma, kama nke ahụ, ọ na-eme ka anyị niile nwee ọganiihu.